यस्ता रोगीले भटमासको कुनै पनि परिकार सेवन नगर्नुहाेस् - ज्ञानविज्ञान
खान-पिनमा शौकीन व्यक्तिलाई कुनै विशेष खाद्य पदार्थको लाभ तथा हानीबारे जानकारी हुँदैन । उनीहरुलाई त्यो कुराले फरक पनि पर्दैन । किनकी त्यस्ता व्यक्तिलाई जुन खानेकुराको स्वाद मनपर्यो, त्यसलाई नखाइ छाड्दैनन् ।
भटमास, जसलाई प्रोटीनको स्रोत मानिन्छ । यसको अतिरिक्त भटमासमा भिटामिन–ए पनि भरपूर मात्रामा पाइन्छ । भटमास खाँदा शरीरमा एमिनो एसिड उत्पन्न हुन्छ । जो शरीरलाई फिट राख्न धेरै आवश्यक हुन्छ ।
सस्तो, पोसिलो र विकारविहीन खाना सबैको इच्छाको विषय हो । तर, धेरैमा यस्तो खाना नपाउँदाको असन्तुष्टि हुन्छ । बजारमा तरकारी र फलफूलको भाउ चर्को हुन्छ । नबिग्रियोस् भनेर फलफूल र तरकारीमा राखिएका रासायनिक पदार्थ वा विषालु वस्तुले स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर पार्र्छ भन्ने कुरा थाहा पाउँदा यस्ता कुराको विकल्प खोजिन्छ ।
स्वस्थ रहन सफा र सन्तुलित खाना खानुपर्ने हुन्छ, तर, पोसिलो मानिएका खानेकुरा कि महँगा हुन्छन्, कि त पाइँदैनन् । तर, प्रकृतिले हामीलाई सजिलो विकल्प प्रदान गरेको छ, ‘टुसा उमारेका खाना’ खद्यवस्तु पोसिलो, सस्तो र केही मिसिवटरहित हुन्छन् । साँच्चै नै टुसायुक्त खाना सामान्य मानिसका लागि वरदान नै हुन् । सस्तोमा यसले सन्तुलित खुराक प्रदान गर्दछ ।
भिटामिन उद्योग नै घरमा खोल्न सकिने सजिलो उपाय हो ।
घरभित्रै करेसाबारी र फलफूल बगैँचा तयार गर्नुसरह हो ।
इन्धन वा पैसा खर्च नगरेरै खानेकुराको उपादेयतामा वृद्धि गर्नु तथा अन्न तथा गेडागुडीमा रहेको खाद्य तत्वको पोषणमा वृद्धि गर्नु हो ।
पोषणयुक्त भोजन दिन्छ ।
यसले बूढो हुने गति मन्द पार्नुका साथै मानिसलाई सुन्दर, स्वस्थ र रोगमुक्त
तुरुन्त प्रयोग हुन सक्ने शरीरलाई आवश्यक शक्ति दिन्छ ।
अंकुरित खानाले पेटमा वायु बनाउँदैन र कब्जियत हुनबाट रोक्छ ।
हरियो तरकारीजत्तिकै फाइदाजनक हुन्छ, तर हरियो तरकारीभन्दा धेरै सस्तो हुन्छ ।
रोगप्रतिरोधात्मक शक्ति बढाउँछ ।
विभिन्न भिटामिन र खनिजको उत्कृष्ट स्रोत बन्छ ।
रोगी, बालबालिका तथा वृद्धमा हुने कुपोषण हटाउन मद्दत गर्छ ।
एक किलोग्रामजति सुक्खा गेडागुडी बिउबाट ६ किलोग्रामजति टुसायुक्त खाद्यवस्तु तयार हुन्छ । अर्थात् कम खर्च गरेर धेरै पोषण प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
टुसायुक्त खाना शक्तिप्रदायक, कब्जियत हटाउने र सुपाच्य हुनुका साथै पोषकतत्वयुक्त हुन्छ । यसमा कम खर्चमा बढी भिटामिन र शरीरलाई चाहिने पोषकतत्व पाइन्छ ।
चिनियाँहरूले चाउमिन र सुपजस्ता खानामा भटमास वा मुँगको टुसाको प्रयोग हजारौँ वर्षदेखि गर्दै आएका छन् । चिनियाँहरू धेरै सक्रिय रहेर लामो समयसम्म बाँच्छन् । यसका धेरै कारणमध्ये एक उनीहरूले यस किसिमको खाना खानु पनि हो । उनीहरूले टुसा उमार्न प्रयोग गर्ने गेडागुडीमा भटमास र मँुगको गेडा प्रमुख हुन् । हाल यसकिसिमको खानाको शैली संसारभर लोकप्रिय हुँदै गएको छ ।
टुसायुक्त खानामा भिटामिन ‘सी’ अत्यधिक हुने कुरा सिद्ध भइसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धमा डा. साइरस फ्रेन्चले मटर तथा अन्य गेडागुडीको टुसा उमारेर खुवाई मेसापोटामियामा देखिएको स्कर्मी भन्ने (भिटामिन सीको कमीले हुने) रोग ठिक पारेका थिए ।
खाना पचाउन, सास फेर्न, मांसपेशी चलाउन, सन्तानोत्पादन गर्न जीवित खाना :
खाना पचाउन, सास फेर्न, मांसपेशी चलाउन, सन्तानोत्पादन गर्न एवं शरीरमा अरु कार्यहरू गर्नका लागि विभिन्न खालका इन्जाइम तत्वहरू चाहिन्छन् । यस्ता तत्वहरूको पूर्ति जीवित खाना अर्थात् काचो खानाले गर्दछ । ताजा फलफुल, नपकाइकन नै खाने खाना, तरकारी तथा टुसायुक्त खानेकुरा आदि जीवित खाना हुन् ।
टुसायुक्त खानाले शरीरमा देखिने बुढ्यौलीको प्रक्रिया ढीला गर्छ । संसारका सबै जीवित कुराको आयु हुन्छ । आयु सकिएपछि मृत्यु हुन्छ । जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था र वृद्धावस्था पार गरेपछि कुनैपनि व्यक्तिको अन्ततः मृत्यु हुन्छ । यी सबै चरण पार गर्दै जादा मानिसको शरीरमा कोष तथा तन्तुहरूमा र अगंहरूमा पनि परिवर्तन आइरहन्छन् । बच्चादेखि वयस्कसम्म यस्तो परिवर्तन देखिन्छ ।
प्रकृतिको आधारमा नै बूढो हुने प्रकृयालाई छाडिदिने हो भने शारीरिक क्षमता तथा आनुवंशिक चरित्रको आधारमा यो क्रम चल्दछ । तर मानिसले प्रयोग गर्ने भोजन, जीवनशैली र मानसिक अवस्था आदिले पनि हाम्रो शरीरमा बुढ्यौली छिटो आउ“छ कि ढिलो आउ“छ भन्ने कुराको निर्णय गर्छ ।
शरीरमा कमजोरी, रोग, कुनै अंगले राम्रोस“ग काम नगर्ने, अत्याधिक मोटाएर आप्mनै शरीर भारी हुने जस्ता समस्याहरू देखा पर्ने कारणमध्ये धेरै बोसो भएका खाना, साथै व्यायाम नपुग्नु पनि हो । यस्तो अवाञ्छित कुराबाट दिक्क भएर मानिसले दैवलाई सराप्न समेत थाल्छ । यस्ता कुराहरूले गर्दा नै बुढिने प्रक्रियाको गति छिटो हुन जान्छ ।
प्राकृतिक कारणले वा जीवनशैलीका कारणले बुढो हुने जुन गति हुन्छ, त्यसलाई धीमा पार्ने मानिसको चाहना हुन्छ ताकि स्वस्थ, सुन्दर भएर लामो समयसम्म बा“च्न सकियोस् । बुढ्यौलीको रोक्नका लागि जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्नु पर्छ साथै भोजनमा टुसायुक्त खाना एउटा राम्रो उपाय हो ।
टुसादार गेडागुडीले खानालाई पचाउन सजिलो हुने भएकोले पेटलाई कम भार पर्छ । हाम्रो खानामा मुख्यतया दुई प्रकारका तत्वहरू हुन्छन्, १) कार्वोहाईड्रेट, २) प्रोटीन । तिनीहरूको पाचनक्रिया हाम्रो शरीरको पाचन अंगहरूमा निर्भर गर्दछ । हाम्रो शरीरलाई आवश्यक पर्ने शक्ति प्राप्त गर्नको लागि हाम्रो खाना पूर्ण रूपमा पच्नु पर्दछ । यस्तो कार्य पाचन प्रणालीले पाचन रसको सहायताबाट गर्दछ । टुसायुक्त खाना प्रयोग गर्दा कम पाचन रसले पनि भोजन राम्रोस“ग पच्छ ।
टुसादार गेडागुडी उम्रने अवस्थामा के हुन्छ ?
उम्रने क्रममा नै एउटा विशेष पाचन रस पैदा हुन्छ जसले कार्वोहाइड्रेटलाई पचाउन मद्दत गर्दछ । त्यसै गरी प्रोटिन पनि परिवर्तन भएर सजिलै पाचन हुने अवस्थामा पुग्छ । त्यस कारणले गर्दा कार्वोहाइड्रेट र प्रोटिनको पाचन प्रक्रिया अगाडि नै भएको हुन्छ । खाना खाइ सकेपछि शरीरमा रहेको पाचन रसले सहजैस“ग यी तत्वलाई पचाउछ ।
यदि टुसा उमारेको छैन भने गेडागुडी जस्तै : मुग, गहु चना पचाउन गाह्रो हुन्छ तर गेडागुडीहरूलाई टुसादार रुपमा प्रयोग गर्दा सामान्य अवस्थाको गेडागुडीभन्दा पचाउन धेरै सजिलो हुन्छ ।
टुसादार गेडागुडीले पाचन रस दिन्छन्
कुनै समयमा खाना र खानामा हुने तत्वका बारेमा मानिसहरूलाई कम ज्ञान थियो । भोजनका तत्वहरूमा कार्वोहाइड्रेट, प्रोटिन र चिल्लो पदार्थ हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान १९ औं शताब्दीमा भयो र १९३० मा भिटामिनबारे थाहा भयो । त्यसैगरी पछि खनिज पदार्थको बारेमा थाहा भयो । पाचन कार्यमा पानी र रेशादार पदार्थको भूमिका निकै पछि आएर मात्र बुझियो ।
त्यसमा पनि पाचन कार्यमा इन्जाइम अर्थात् पाचन रसको भूमिका बारे बुझिएको धेरै दशक भएको छैन । इन्जाइम मानव शरीरको लागि अति आवश्यक तत्व हो । हाम्रो शरीरमा इन्जाइमले पाचन कार्यमा सहयोग गर्दछ । यसले भोजनलाई पाचन गरेर शक्तिमा परिणत गर्न सहयोग गर्दछ । शरीरमा हुने रासायनिक प्रकृयाको लागि इन्जाइम स्वयं परिवर्तन नभई यसले त्यस कार्यमा उत्प्रेरणा या सहयोग गरिरहेको हुन्छ ।
हाम्रो शरीरलाई इन्जाइमको अत्यन्त आवश्यकता हुन्छ । तर कति जनाले भोजन पचाउनका लागि बोतलमा रहेको इन्जाइम किन्छन् र प्रयोग गर्छन् तर यो शरीरको लागि काम लाग्दैन । बोतलमा इन्जाइमहरु प्राकृतिक इन्जाइमको तुलनामा ज्यादै कम हुन्छ । तर हामीले प्रयोग गर्ने टुसादार गेडागुडीमा चाहि“ इन्जाइम पर्याप्त रहन्छ ।
Don't Miss it कालो नुन अथवा बिरे नुनले खाना स्वादिष्ट बनाउनको साथै अन्य फाइदा, यस्ता छन्
Up Next किचेनमा खाना पकाउँदा महिला र पुरुष दुवैलाई उपयुक्त हुने केहि टिप्स जनिराखाैँ
यस्ता छन्, बिवाहपछि पार्टनरलाई धोका दिने कारण
बिवाहअघिको अफेयर कतिपय पुरुष/महिलाको बिवाहअघि नै गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड हुन्छन् । बिवाहपछि पनि उनीहरुको त्यो सम्बन्ध कायम रहन्छ । आफ्ना पति/पत्नी भन्दा…